I-BOJACK HORSEMAN YEXESHA LE-6 UMHLA WOKUKHUTSHWA KWENETFLIX, ISIQENDU, ISIXHOBO, NANTSI YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI - IINKQUBO ZETV
UBoJack Horseman ngumdlalo weqonga weqonga wabantu abadala baseMelika owenziwe nguRaphael Bob-Waksberg. Libali elimalunga ne-
UBoJack Horseman Yimidlalo yeqonga yeqonga yabantu abadala yaseMelika eyenziwe nguRaphael Bob-Waksberg. Libali elithetha ngehashe eligama linguBoJack Horseman oceba ukubuyisa ukubaluleka kwakhe okulityelweyo njengosaziwayo. Olu luhlu lubonisa umzabalazo wakhe wokulutha kunye noxinzelelo.
Ixesha lokuqala eliboniswe kwi-Netflix ngo-Agasti 22, 2014. Olu luhlu luye lwazisa amaxesha amahlanu asele equlathe iziqendu ezili-12 inye. Imalunga nokwazisa ixesha lokugqibela, okt ixesha lesithandathu, eliza kuba kwiindawo ezimbini. Umlingisi ophambili kuthotho ngu-Will Arnet. Ixesha lesithandathu sele liza kuza kwiNetflix. I-trailer yolu ngcelele iya kuthi ifike ukuphela kukaDisemba okanye ngoJanuwari 2020.
uphuma nini u-anne nge e season 4
Ixesha le-BoJack Horseman 6: Umhla wokukhutshwa
Umhla wokukhutshwa ixesha le-6 iqhubeke nokulibaziseka njengoko ilixesha lokugqibela liza kuthi ndlela ntle kubalandeli bayo. Njengoko isizini 6 iyeza kwiindawo ezi-2, inxenye yokuqala ifike ngo-Okthobha 25, 2019, kwaye icandelo lesibini liza kuza ngoJanuwari 31, 2020. Abalandeli balinde ngolangazelelo ixesha lokugqibela ukuba lifike.
Kolu luhlu inxenye yokuqala yexesha lesithandathu, yeza neziqendu ezisibhozo, ke icandelo 2 kusenokwenzeka ukuba libe neziqendu ezisibhozo. Ukugcina engqondweni imiba emininzi yokhathalelo lwempilo yengqondo, olu ngcelele lubonakalise ngokumangalisayo iingxaki zoxinzelelo, isizungu, njl njl Olu luhlu luqale ngo-2014 kwi-Netflix, kwaye ukusukela ngoko iqhubekile nokugcina indawo yayo phakathi kwezona webhu zithandwa kakhulu.
Olu luhlu luyilelwe ngumdwebi wekhathuni odumileyo uLisa Hanawalt, owayengumhlobo obalaseleyo kaBob-Waksberg kwisikolo samabanga aphakamileyo. Umboniso ukwabonakalise neengoma zokuvala ekupheleni kwenxalenye nganye. Kwinxalenye yokuqala, ingoma yokuvala yayithi 'Ayinakwenzeka'. Olu luhlu lube nempendulo entle evela kubaphulaphuli.
Ixesha lesithathu lafumana ukuvunywa ngama-67% ngabaphulaphuli kwaye ixesha lesi-5 lafumana imvume engama-97%. Umdla wabaphulaphuli ugcinwe kwesahlulo sokugqibela kwaye usekho. Abaphulaphuli banemincili kwaye balinde ngolangazelelo inxalenye yokugqibela.
Ixesha le-6 leBoJack Horseman: Cast
Abalingisi kolu thotho akufuneki kutshintshwe; iyakuhlala injalo.
Umlinganiswa ophambili kolu ngcelele nguBoJack Horseman (onengxaki yosizi, isizungu kunye noxinzelelo). UPrincess Carolyn, ibhotolo yamandongomane, Todd, Diane, kunye nabanye abalinganiswa baya kubonwa okokugqibela kwinxalenye yokugqibela yexesha lesithandathu.
I-Netflix iya kukhupha i-trailer yenxalenye yokugqibela ekuqaleni kukaJanuwari 2020. Ke masilinde inxenye yokugqibela yeBoJack Horseman asigcinele yona.
Ixesha lamantombazana angama-monster 2
ixesha le-3 lilahlekile kwisithuba se-netflix
umhla wokukhupha ukucula
uphuma nini u-shrek 5
iingqondo zolwaphulo-mthetho ezona ziqendu zibalaseleyo
Iimuvi zoopopayi zakutshanje ze-dc